bracking news::लक्षण नदेखिएपनि कोरोनाले ७० प्रतिसत भन्दा धेरैको फोक्सो खत्तम बनाइसकेको तथ्यांकले देखाएको छ, फोक्सोको क्यान्सरबाट बच्नुहोस,ढिला नहुदै पढ्नुहोला – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Health/bracking news::लक्षण नदेखिएपनि कोरोनाले ७० प्रतिसत भन्दा धेरैको फोक्सो खत्तम बनाइसकेको तथ्यांकले देखाएको छ, फोक्सोको क्यान्सरबाट बच्नुहोस,ढिला नहुदै पढ्नुहोला
bracking news::लक्षण नदेखिएपनि कोरोनाले ७० प्रतिसत भन्दा धेरैको फोक्सो खत्तम बनाइसकेको तथ्यांकले देखाएको छ, फोक्सोको क्यान्सरबाट बच्नुहोस,ढिला नहुदै पढ्नुहोला
२. मकै : मकै वर्षामा धेरै खाइन्छ । यसमा कोलेस्ट्रोल फाइबर समावेश हुन्छ । जुन मुटु र फोक्सोका बिरामीहरूका लागि धेरै उत्तम हुन्छ । हेल्थलाइन रिपोर्टका अनुसार १०० ग्राम मकै १४.५ प्रतिशत फाइबर पाइन्छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
७. गाढा चकलेटः कोकाको दानाबाट तयार गरिएको चकलेट एन्टी आँक्सिडेन्टको उत्तम स्रोत हो । धेरै अध्ययनहरूमा यो प्रमाणित भएको छ कि डार्क चकलेट खाँदा स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ । साथै मुटुसँग सम्बन्धित रोगीलाई पनि सहगोग पुग्छ । १०० ग्राम डार्क चकलेटमा १०.९ ग्राम फाइबर पाइन्छ जुन फोक्सोको लागि पर्याप्त मानिन्छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **